Facilis သင်္ဘောများနောက်မျိုးဆက် HUB Shared Storage System | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Facilis သင်္ဘော Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hub Shared သိုလှောင်မှုစနစ်
Hudson, MA (မေ 29th, 2019) - Facilis, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကွန်ရက်များအဘို့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းယနေ့က၎င်း၏အသစ်အ Hub Shared သိုလှောင်မှုစနစ်ယခုရေကြောင်းကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ တစ်ဦးလုံးဝအသစ်ကပလက်ဖောင်းအဖြစ်တည်ဆောက် Facilis Hub ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ် Facilis ပိတ်ပင်တားဆီးမှု-Level virtualization နှင့်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှု Workflows တောင်းဆိုများအတွက်လိုအပ်သည့် Multi-ဆက်သွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူမျှဝေ File System ။ ၏ထို့အပြင်ဗားရှင်း 7.2 Facilis စနစ်က software နှင့် FastTracker 3.0 ယခုရရှိနိုင်အပေါင်းတို့နှင့် Hub စနစ်များတွင်ထည့်သွင်းသည်။
အသစ်က Hub Shared သိုလှောင်မှုစနစ်ကနေကြသည်ကိုလက်ခံရရှိပထမဦးဆုံးဖောက်သည်နှစ်ယောက်တို့ ပုန်ကန်တီဗီ နှင့် BigStar Motion ဒီဇိုင်း.
"Facilis'' သစ်ကို Hub ဖြေရှင်းချက်အသိပေးစာယူပြီးအလားအလာရှိသည်။ ပုန်ကန်တီဗီ & BigStar Motion ဒီဇိုင်းမှာမကြာသေးမီကတပ်ဆင်နှင့်အတူ, client များပုန်ကန် TV နဲ့ 3GB / s ကို Bigstar မှာ install လုပ် HUB32 အဘို့မှာ HUB2 များအတွက် 16GB / s တစ်ခုတည်းယူနစ်ကနေ bandwidth ကို, အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များကအထင်ကြီးခဲ့ကြ, "Cliff ကပြောပါတယ် ဗီဒီယို Technologies က Group ၏ Allen က (VTG) ။
"ဒီ Facilis Hub စနစ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' Workflows တစ်အများကြီးကျယ်ပြန့်သောအဘို့ကိုပတ်ဝိုင်းမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပါပြီ။ Built-in FastTracker ပလီကေးရှင်းအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီပေးနေနှင့်အတူ Facilis Hub စနစ်, client များ, ရှာအညွှန်းကိန်းများနှင့်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုမိုမြင်သာနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက် Hub system ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက် proxy များနှင့်စမ်းကြည့်ရှုရန်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအတူတူပင်ဆာဗာနှင့် user interface ကိုကနေကိုမိုဃ်းတိမ်ပစ်မှတ်ထားနိုင်စွမ်း, spinning disk နဲ့ LTO လည်းယခင်ကလက်စွဲစာအုပ်, အချိန်စားသုံးဖြစ်စဉ်ကိုဘာပျေါမှာတိုးတက်အောင်အတွက်ကြီးမားတဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်, "Allen ကဆက်ပြောသည်။
Facilis Cloud နှင့် FastTracker ကန့်ကွက်
ဗားရှင်း 7.2 အသစ်, Facilis တိမ်တိုက်တိမ်တိုက် & LTO သိုလှောင်မှု virtualizes ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့်ဆာဗာအပေါ်တစ်ဦး cache ကိုအသံအတိုးအကျယ်စသည်မှတဆင့် client ကို desktops တွေနဲ့ပေါ်ရရှိနိုင် Facilis Shared File System ။ "အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှု FastTracker Auto-indexing နှင့် proxy ကိုမျိုးဆက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါကလမ်းကြောင်းမော်ကွန်းတင်နှင့်ရိုးရှင်းသော, အကျွမ်းတဝင် interface ကိုမှတဆင့်စီမံကိန်းကို data တွေကို restore လုပ်ဖို့အလွန်အစွမ်းထက်လမ်းဖြစ်လာ," မှာဂျင်မ် Mckenna, VP အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ကဆိုပါတယ် Facilis။ "ဒီအရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှု cache ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြုမူအခြားမည်သည့်အသံအတိုးအကျယ်တူ၏သို့သော်နောက်ကွယ်မှအဆုံးမဲ့သိုလှောင်မှုရှိပါတယ်!"
Facilis ဗားရှင်း 7.2 features အသစ်:
Facilis Cloud ကိုကန့်ကွက် - ဆာဗာနှင့် client ကို desktop ပေါ်မှာမှ Object ကိုသိုလှောင်ရေးများရရှိစေ
Facilis FastTracker 3.0 - FastTracker ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုအထောက်အပံ့
Linux တို့အတွက် Added Kernel ပံ့ပိုးသူ - Facilis Linux ကိုလိုင်းယခု Linux Kernel 5.0.x အပေါ်ထောက်ခံနေသည်
တိုးတက် Web ကို Console အ UI ကို - အမှောင် mode ကိုပိုမိုအမြောက်အများလုပ်ရပ်များ, သိုလှောင်မှု tab ကိုအများကြီးပိုပြီး
ရိုးရှင်းသောဆာဗာ Upgrade - နယူး click တစ်ချက်, တဦးတည်း reboot, server ကို installer ကို။
FastTracker 3.0 နယူးအင်္ဂါရပ်များ
နယူးလိုင်း Interface - FastTracker Desktop ကို Browse ကိုပြတင်းပေါက်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ် web-based interface ကို featuring
တိုးတက် proxy ကိုအရည်အသွေးကို options တွေကိုနှုန်း-catalog proxy ကိုရလာဒ်ကဒိနှင့်ဝယ်လိုအားအပေါ် proxy ကို
ယင်းကို Adobe Panel ထဲကယခု Add နဲ့ Edit Metadata
လျင်မြန်စွာနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ Keyword / မှတ်ချက်နောက်လိုက်မှတ်သား
ယင်းကို Adobe Panel ကိုနှင့် Desktop ကို Browse ကိုကနေအပြည့်အဝ resolution ကိုရင်းမြစ်ပစ္စည်း၏ပစ်လွှတ်
CatDV ပေါင်းစည်းရေး - အသစ်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရည်ညွှန်းကြသောအခါ FastTracker ယခု CatDV သတိပေး။
Volume ကိုရှာရန် Filter ကို - မှတ်တမ်းယခုသီးခြားအညွှန်းအသံအတိုးအကျယ်အားဖြင့်သင် browse နိုင်ပါသည်။
Facilis FastTracker မဆိုဘို့ရရှိနိုင်ပါသည် Facilis လက်ရှိထောက်ခံမှုစာချုပ်နှင့်အတူဖောက်သည်များနှင့်ယခုန့်အသတ်ထိုင်ခုံအရေအတွက်ပေးထားပါတယ်။
ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ပေါင်းစည်းမှု လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-05-30
ယခင်: Argosy 4K နှင့် IP အကူးအပြောင်း၏ပံ့ပိုးမှုအတွက် Canare နှင့်အတူ EMEA မိတ်ဖက်ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Calrec Salt Lake City, ရဲ့ KUED မှပတ်ပတ်လည်အသံများရရှိစေ